SAWIRRO: Maxaa looga hadlay Shirka Golaha Wasiirada Jubbaland ? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Maxaa looga hadlay Shirka Golaha Wasiirada Jubbaland ?
January 13, 2022 Xuseen 5
Madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiiradda Jubaland oo maanta lagaga hadlay qodobo kale duwan.
Kulanka waxaa ugu horeyntii Madaxweynaha golaha oga warbixiyey xaaladda guud ee dalka iyo arimaha doorashooyinka oo xiligan lagu guda jiro sidii losoo dhameeystiri lahaa xubnaha kamid noqonaya kuraasta aqalka hoose ee barlamaaka Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimadka ee Dowladda Jubaland ayaa kawar bixisay xaalada caafimadka ee deeeganada Jubaland, waxa ay golaha usoo gudbisay in wali ay taagantahay xaalada Covid-19 isla markana ay wadaan wacyi galinta bulshada iyo dadaalada ay xanuunkan ku xakamaynayaan.
Wasaarada Amniga Dowladda Jubaland ayaa golaha usoo gudbisay warbixino la xiriira amaanka deegaanada Jubaland. waxa ay sheegtay in feejignaan dheeri ah ay ku jiraan laamaha amniga maadaama uu dalku kujiro doorasho kooxaha dhagar-qabayaasha ay isku dayayaan sidii ay ku dhibaateen lahaayeen dadka biramageeyada ah.
Dhinaca kale golaha wasiiradda ayaa ansixiyey heshiis ay wada galeen Wasaaradda Dekadaha iyo Gadiidka Badda Jubaland iyo shirkad ganacsato ree Jubaland ay leeyihiin, taasoo maalgashi ku sameeyn doonta keydka shidaalka ee ku dhaxyaala Dekada Kismaayo si loo hormariyo ilaha dhaqaale ee ay ku tiirsantahay Dowlada Jubaland.
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubaland ayaa ay sheegtay in deegaanada Jubaland ay wali ka jiraan abaaraha ku dhuftay guud ahaan dalka, gurmadyo kale duwana ay wali ka wado deeganada ay abaaruhu ka jiraan.
Agaa!awoowkaa la …,!Eega ma waxay ka Shirayaan wewe mise wiyaano ama wiryaa keenee ayaa nahay?.Dhuxusha joojiya si dhirtii loo badbaadsho .
Shirka intaas oo qof isugu timid oo Hal qowl oo xalaal ah aan looga hadal waa yaab,jubaland wax war ah Kama hayaan 20 kaa qawsaar maa Kismaayo kaliya ayaa Jubaland lagu koobay.
Axmed Madoobe iyo Siciid Dani si bay isugu daarteen fiiragaabnimada iyo liidnimada sida ba’an uga habsaamiyay in ay labadoodan geyi ee mataanaysan, liilansan, oo dalkana ugu istraatijisan marinkooda mariyaan oo maqaamka, martabadda, iyo mansabka sarrreeya ee ay mudan yihiinna kusimaan.
Bilxaqiiqa, waa fajiciso aad loola amankaago sida ay labadooduba u gabeen hiraalka labadan geyi ku habboonaa ee hor haawanayay intii ay iskaashanayeen oo karuurkana wada dhamayeen.
Waxaa uu waajibkoodu ahaa – haddii ay kasmadaas leeyihiin – in ay haldoorrada qaybaha kala geddisan ee bulshada labadan geyi wadaagta lakaashadaan haleelidda hiraalka iyo hiigsiga hayinka ah ee labdan geyi hor hillaacaya oo salkana kuhaya kartidooda istraatijiyadeed ee ay Soomaaliya inteeda kale kula tartami lahaayeen oo kun maylna kaga horreyn lahaayeen.
Sidaas ma aysan solin e, intay nacasnimo xun qaadday ayaa waxay waqtigii, fursadihii, iyo hantidii qaalisanaa ku khasaariyeen in ay qawsaarrada Xamar isku xagxaganaya Villada kula xintamaan oo labadan geyina aayahoodii dahabiga ahaa kaga afqabtaan.
Puntland iyo Jubbaland oo maanta waxsoosaar baahsani kahirgalsan yahay kun mayl ayay Soomaaliya kasii horreyn lahaayeen oo talo iyo tusaaleba loogu soohiran lahaa. Sidaas lamayeelin e Xamar ayaa geed loogu dabray oo lalasugayaa.
In uu maamulka Jubaland ee Soomaaliya madax ka noqdo ayaa markii horaba qaldanayd,waayo ma la aqoon maamul,nin reer Kismaayo ahna ma aha,waqti aad u dheer ayuu xukunka jooga wax u dan ah dadja Jubaland na ma qaban.
Waxaa uu wakiil u yahay maamulka Kenya degmada Gaarisa,war Ninka ha la iska qabto,waxa uu u dhaqmaa sidii dagaal ooge,yaan lago fiirsan baabi’intii dhulka Jubada Hoose ,Jubada Dhexe iyo Gedo.